Faka i-Virtualbox ku-ArchLinux | Kusuka kuLinux
Faka i-Virtualbox ku-ArchLinux
Namuhla ngisanda kufaka iLaptop efana nale engiyisebenzisela umuntu engisebenza naye, kepha yena akasebenzisi njengami I-Qemu-KVM, kepha kulula kakhulu ukusebenza nayo I-Virtualbox.
Ukufaka i-Virtualbox ku I-ArchLinux kulula. Sivula ukuphela bese sibeka:
Kamuva sengeza umsebenzisi wethu eqenjini vboxusers:
Sivala iseshini bese siphinda singena. Sikhipha esigungwini
Sisebenzisa i-Virtualbox futhi sihlola ukuthi alikho iphutha elenzekayo. Manje, ukuze singadingi ukwenza umyalo wangaphambilini njalo, sakha ifayili vbox.conf ngomyalo:
Futhi sikubeka ngaphakathi:
Siyaqalisa futhi kuphelele lapho ..
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Faka i-Virtualbox ku-ArchLinux
Ingabe leyo yi-virtualobx i-VirtualBox OSE noma i-VirtualBox ehlanganiswe yi-Oracle? Kusukela ku-Debian Wheezy, ngifake i-Virtualbox, kepha ihlanganiswe yithimba le-Debian (ilogo nesithombe esisetshenziswe ewindini elithi "cishe" kuvela kuhlobo lwe-OSE).
Sengivele ngilande i-Arch ISO ukuze ngikwazi ukudlala kwi-PC ebonakalayo.
Futhi awuyena umsebenzisi we-debian? kwenzekeni ku-xcfe? awusho ithi ingcono kune kde? -.-
Sekuyisikhathi eside, eside, eside kusukela umbono wami ushintshile, kancane 😀
Mina, ngifuna ukuvuselela kuphela izinhlelo engizisebenzisa kakhulu, hhayi uhlelo lwe-ENTIRE njengoba kwenzeka ku-Arch.Ukudlala nge-kernel entsha futhi ujabulele izinhlobo zokugcina zakamuva zengxenye ngayinye ye-GNU / Linux, kuhle iKhothamo.
Kubukeka sengathi umngani we-raputin wayeka ukuba yisivakashi njalo.
Kufanele kwanele ukungena ngemvume futhi, ukuze usebenzise ushintsho ekulungiselelweni kweqembu lomsebenzisi. Yize ukuqala kabusha kukhululekile njengeXD.
I-athikili enhle kakhulu,
Ngendlela elav, umbuzo omncane, uthi usebenzisa iQemu-KVM, kungenzeka ukubeka umshini obonakalayo kusikrini esigcwele esibanzi, ngoba angikwazi ukukwenza esikhundleni ngeVirtualbox yebo, uma kungenzeka ungangitshela kanjani.
Yebo, engizame kakhulu yi-Full Screen futhi uma kuyangisebenzela 😀
Yebo, ngiyakwazi ukukufaka kusikrini esigcwele, kepha ngo-4: 3 angikwazi ukukwenza ku-Widescreen, kepha ku-Virtualbox kungakwenza.
Well, honestly, angikazami .. Uma ngiphumelela ngiphawula lapha por
Ngokulungiswa kwangaphambilini okufakile kulokhu okuthunyelwe, kusobala ukuthi kusebenza izimanga. Okuxakayo ukuthi esimweni seDebian Stable, yonke leyo nqubo oyibeke ku-Arch akudingeki yenziwe, ngoba lokho kwenziwa ngokuzenzakalela.
Yebo, kubonakala kulula ukufaka.
/ dev / null kusho
Angiyisebenzisi i-Arch, kodwa kuhle ukwazi… ..
Phendula ku- / dev / null
Nami angiyisebenzisi, kepha ngizoyinambitha.
UJean Pierre kusho
I-Universe O ehambisanayo:
Phendula uJean Pierre
Ubonakala ufunda ingqondo yami. Namuhla bengicabanga ukufaka i-virtualbox futhi bengicabanga ukuthi i-sudo pacman -S virtualbox izokwanela bese ngiyibheka kwimenyu yami ye-kde bese uqhafaza ukuyisebenzisa.
Isiko elijwayelekile lomuntu ongenalwazi njengami: iyiphi inkinga engavela ukuyifaka njengoba bengicabanga ukuthi yenziwe futhi yiziphi izinzuzo ezikhona ngendlela oyiphakamisayo?
Okwenzekayo ukuthi i- @elav ingeza amaphakheji lapho kutholakala khona amamojula we-VirtualBox, okubalulekile kuwe ukulingisa uhlelo olusebenzayo ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, ibuye ingeze iphakheji ene-Guest Additions ISO uma uzolingisa iWindows, Mac noma enye i-distro ye-GNU / Linux.
Futhi umyalo wokugcina wukuhlela imodyuli yokulawula ibhuloho ye-VirtualBox ukuze ihlale isebenza lapho ivula i-PC futhi akudingeki ukuthi uyisebenzise ngesandla.
Lokho kuzoba yilokho kuphela obekusele ukuthi kucaciswe.
Incazelo enhle. Ngiyaqonda ukuthi ukufakwa kwamamojula we-virtualbox-guest-iso ne-virtualbox-host-modules kungukusebenza okungcono kwe-OS ebonakalayo.
Ngakolunye uhlangothi, kumyalo weSudo gpasswd -a $ USER vboxusers, ngifanele ngibeke igama lami lomsebenzisi lapho "USER" noma lapho "$ USER"?
Futhi into eyodwa yokugcina: uma ungafuni ukuthi lawo amamojula we-virtualbox bridge agijime ngawo wonke amandla-up, ungasakha kanjani isiqalisi esiphakamisa lawo ma-module bese sivula i-virtualbox (okungukuthi, noma nini lapho ngifuna hhayi ngamandla ngamunye? )?
Ngokomqondo lapho ufaka i- $ USER, kuthatha umsebenzisi wakho, ekugcineni okufana nokubeka:
Yebo, ngikutholile lokho kusuka egameni lamaphakeji, kepha nginika umsebenzisi imvume kuma-vboxusers, ngoba $ USER ilingana nomsebenzisi omsebenzisayo njengamanje (kepha hhayi impande).
Mayelana nombuzo wakho wokugcina, angikwazanga ukukuphendula. Kuzofanele ngiqale ukusebenzisa i-Arch ukukutshela ukuthi kufanele ifakwe kanjani, yize kukhona ne-Arch wiki yokukusiza ngayo yonke leyo mibuzo ye-VirtualBox.
Yebo, empeleni ifaka kanjalo. Kepha lapho uyisebenzisa, uma ungakwenzi konke okunye, khona-ke amaphutha angavela 😉
Ngiyabonga ... Ngibhale ukuphawula kwangaphambilini lapho okwakho kufika
Iqiniso. Bona ukuthi kuzoba ne-plugin ephuma nemiyalezo efana nokuthi "Amazwana amasha phezulu / phansi" njengakuDisqus.
Iqiniso ukuthi ngisebenzisa iDebian, kepha umuntu engihlala nginaye eduze kwami ​​usebenzisa i-arch, futhi akungikhathazi nakancane, kepha ngithembekile, ngigcina i-DEBIAN yami
Nginekhono kwaDebian naseSlackware, kepha okufanela izidingo zami iSlackware (yize ngithanda i-Iceweasel, ayingikhathazi ngezibuyekezo zayo ezihlala zikhona).
Empeleni ngibe ne-linux isikhashana, empeleni ngizoqhubeka unyaka, futhi ngiqale nge-debian futhi ngiyafa nge-debian + KDE
Uxolo .. Kusho ukuthini lokhu kuphawula? Sikhuluma ngokufaka i-VirtualBox ku-ArchLinux. 🙁
Saqala kanjalo-ke sonke. Kungenzeka ukuthi usebenzisa i-terminal ngenyanga nengxenye.
Ngisebenzisa ukuphela kwezinyanga eziyi-8 ezedlule ngoba ngiyasithanda isikrini esimnyama esincane
Yebo, nge-Arch noma iSlackware, uzoyithanda kakhulu.
Ngeke ushintshe umqondo wami ...... angisasho igama le-distro engiyithandayo futhi ngoba uma kungenjalo umngane wami u-Elav uyangithethisa ... hahahaha
cha ngokungathi sína, bheka, i-debian yinto ekhethekile kimi, angisho ukuthi i-arch yinto encane, kepha yimigomo yami, ngikwazise ukuthi kwi-laptop yami nginezitikha ezimbili, esisodwa se-arch nesinye se-debian, kuvela nesinye se-batman, noma cha, 2., zingu-2 we-batman ... XD
Hhayi, engikuthandayo nge-Debian ukungafani kwezinto ezinakho kuzingxenyekazi zayo (futhi ekhaya ngine-PC yami ene-Wheezy ekhishwe yi-Iceweasel), futhi mayelana ne-Slackware, yindlela enginikeza ngayo lapho ngilawula amaphakheji ayo .
Ngisanda kusuka ku-GNOME 3.4 ngaya ku-KDE ngenxa yokuwa kweyokuqala lapho ngisebenzisa i-Nautilus ngeFayileRoller njenge-superuser, futhi lapho i-decompressing amafayela, yaqina futhi iphaneli lanyamalala kaningi kakhulu.
Hhayi, "ngokuqonda kwakho" kwe-linuxear * isikhathi esingaphezu konyaka *.
Yebo, uma unokunye okuncane sizokhuluma nge-Arch Linux futhi.
Kuhle kakhulu, angikaze ngisebenzise i-vbox isikhathi eside.
Yize ngibona iSudo futhi into yokuqala engicabanga ukuthi yi-ubuntu 😛
I-SUDO ifana nesendlalelo esengeziwe sokukwazi ukusebenzisa imisebenzi ethile njenge-superuser, kepha isikhawulelwe.
Ngokwami, angijwayele ukusebenzisa i-SUDO kuze kube manje futhi ngisebenzisa ngqo i-superuser ku-PC yami ye-Debian.
Sawubona elav. Siyabonga ngokwenza lolu hlobo lokufundisa, kubantu abasanda kuqala, njengami.
Ngilithanda kakhulu leli khasi, ngoba alilona elitist.
Ukukhuluma iqiniso, sengivele ngilande i-Arch ISO ukuze ngizibonele mathupha ukuthi baningi abacibisheli abazizwa lapho befaka leyo KISS + RTFM distro okokuqala.
Sawubona, ngisebenzisa i-virtualbox lapho ngisebenzisa i-Linux (ubuntu, fedora noma i-openSUSE) ukwenza amanethiwekhi wami we-lan futhi ngizijwayeze amaseva ngamakhasimende we-win, i-linux, njll., Ngisebenzisa ama-distros afana ne-debian, ama-centos, i-ubuntu server yamaseva noma okungcono I-BSD, nginesidingo sokuvala ibhuloho noma ibhuloho, ngifaka imishini ethile kunethiwekhi yangaphakathi futhi amaseva ayibeke njengebhuloho ne-pc ebonakalayo esebenza njengesango futhi enikeza i-intanethi, kube lula kimi ukukwenza nge-virtualbox, nge-kvm-quemu uma ngike ngazama, kepha bekungelula, futhi bengingakwazi ukwenza konke engikwenze noma engikwenza nge-virtualbox, ungasisiza ngokwenza isifundo (ngingajabula kakhulu) umngani wokuthi ungabhuloga kanjani phakathi komshini obonakalayo noma yiluphi uhlelo lokusebenza futhi umshini ophathekayo one-kvm-quemu usebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza? ukubingelela okuphindiwe.
UMarco Lopez kusho
I-ArchiLinux, ngiyayivivinya, kuphela ukuthi nginezinkinga ezincane kepha kuhle futhi bekungangcono futhi ukwazi ukuthi ungafaka kanjani i-GuestAdditions eyiWindows the Host ne-ArchLinx nayo eyiyo. Sanibonani
Phendula uMarco López
Sifaka kuphela: i-sudo gpasswd -a $ USER ama-vboxusers noma esikhundleni se- $ USER igama lomsebenzisi lifakwa kimi i-sudo gpasswd -a $ leonardopc1991 vboxusers, lowo ngumbuzo wami kuphela
kuphela US $ USER
CHA! ufaka igama lomsebenzisi wakho we-arch yakho uma umsebenzisi wakho engu-leonardoLOL gpasswd -a leonardoLOL vboxusers ngaphandle kwe- $ sign
Kuyangisebenzela, kuphela lapho ufaka i-VirtualBox Extension Pack kusuka enguqulweni elandekayo engu-4.2.18 ayisangivumeli ukuthi ngiqale, kufanele ngisuse isandiso futhi le ebonakalayo nayo ibe ngu-4.2
akukephuzi kakhulu ukunibonga ngesiqondisi sokufaka ...
Rodrigo Moreno kusho
sawubona umuntu angangisiza ngale nkinga ye-virtualbox. ukuvalwa kwamadiski okubonakalayo, susa ekhaya lami ifolda ebizwa nge-VirtualBox VMs. Futhi manje ngithola ibhokisi lokubonakalayo elingafinyeleleki kulawo madiski, kepha angikwazi ukuwasusa noma yini.
Ngenzenjani ukusula lokho? Ngiyabonga.
Phendula uRodrigo Moreno
Eddy holliday kusho
Umnikelo omuhle. Ungisize kakhulu kwi-Manjaro Linux yami.
Phendula u-Eddy Holliday
Ukusikisela ngeSystemd kunephutha uma kusetshenziswa ibhuloho phakathi kwenethiwekhi engenantambo nentambo, kwenzeka into enzima kimi ngifaka iseva ye-LTSP lapho ngidinga ukubopha womabili amanethiwekhi futhi isixazululo bekungumyalo
Ngibingelela kubo bonke, bheka ngilandela izinyathelo kepha i-terminal inginikeza leli phutha, futhi angisazi ukuthi ngenzeni:
[impande @ Carlos-PC carlos] # modprobe vboxdrv
modprobe: FATAL: Module vboxdrv ayitholakali.
[izimpande @ Carlos-PC carlos] #
Uma ungangisiza, ngiyabonga, ngiyabonga.
Isidinga ngempela ukubuyekeza lesi sihloko nginephutha elifanayo futhi ngibona usuku lokuphawula kwami, kungashiwo yini ukuthi lezi zinyathelo zokufaka seziphelelwe yisikhathi?
UJacob tuz kusho
Bafanelwe ubhiya, ngibuthola kanjani kubo?
Phendula uJacob Tuz
Sawubona, ngafaka ibhokisi elibonakalayo ku-linux arch gnome, ngalandela zonke izinyathelo kepha lapho ngiyisebenzisa akuqali ngokubonakalayo, ngenzeni?
Uma ufuna ukudala umshini obonakalayo nge-adaptha yebhuloho, kufanele usebenzise umugqa olandelayo:
I-sudo modprobe vboxnetflt. Uma kungenjalo, uthola leli phutha:
Yehlulekile ukuvula / ukudala inethiwekhi yangaphakathi ye-'HostInterfaceNetworking-wlan0 '(VERR_SUPDRV_COMPONENT_NOT_FOUND).
Enye yamamojula we-kernel ayilayishwanga ngempumelelo. Qiniseka ukuthi awekho amamojula we-kernel avela ku-verison endala ye-VirtualBox akhona. Ngemuva kwalokho zama ukuphinda uqoqe futhi ulayishe kabusha amamojula we-kernel ngokusebenzisa i - '/etc/init.d/vboxdrv setup' njengezimpande
Uxolo, ngikhohliwe ukwengeza ukuthi kufanele ufake i-repertoire yamathuluzi wenetha:
I-sudo pacman -S net-amathuluzi.
sudo nano /etc/modules-load.d/virtualbox.conf bese ungeza:
Ngemuva kwalokho, senza kulayini wokuyala:
Lokhu kufanele kusule iphutha engishilo ekuqaleni futhi kusivumele ukuthi siqale i-VirtualBox ngokuzenzakalela nge-adaptha yebhuloho etholakalayo.
Khweza i-Battle Net Server ku-Debian
Ungazilayisha kanjani izithombe ze-Instagram ku-Twitter